***…ဥယျာဉ်မှုး…*** | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » ***…ဥယျာဉ်မှုး…***	14
Posted by maung khinmin on Jun 27, 2012 in Creative Writing, Poetry | 14 comments
တစ်ခါ တစ်ရံ ကာရံ နုသစ်
လွမ်းလို့နွမ်းသူ
ကြမ်းလို့ပမ်းသူ
လူ့ လောက ထဲ
maung khinmin says: ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်…အဲ…ဗျာ..
မောင်ပေ says: တစ်ခါတစ်လေကြတော့လဲ
maung khinmin says: ဥယျာဉ်မှုးဆိုတာ….ပန်းနံ့ ကိုယဉ်နေပြီဗျ….
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: မိုက်တယ်ဗျာ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 706
marblecommet says: မမြင်ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့
maung khinmin says: ဆြာကမ်း….တို့ အတွက်ကတော့…ရိုးအီနေမှာပ
ကျုပ်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်က..ဘင်္ဂါလီ ဆိုတဲံ့ခေါင်းစဉ်နဲ့..
မွန်မွန် says: မွန်မွန်က ကာရန်ကို အရမ်းသဘောကျတာပါ…လေးလုံးစပ်ကဗျာတွေကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်…
ဒီရက်ပိုင်း ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်….ကဗျာလေးဘာလေး ထွက်လာမလားလို့… အော်…ဒါနဲ့ စကားမစပ်…ကာရန်၊ လွယ်လျက် (ဟထိုးပါတဲ့ လျက် မရှိပါ)၊ ကြမ်းလို့ ပန်းသူ၊ အပန်း လည်းပြေ (ပင်ပန်းကို ပြောချင်တာ ထင်ပါတယ်)..
စာလုံးပေါင်းကြောင့် ကဗျာကို ထိခိုက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ ကဗျာလေးက အရမ်းကောင်းပါတယ်…
maung khinmin says: ကျေးဇူးပါမွန်၂….ခုလိုထောက်ပြတဲ့အတွက်….
ဖိုးထောင် says: ကဗျာရေးချင်စိတ်တောင် ပေါ်လာပြီ
maung khinmin says: ရေးချင်စိတ်ပေါ်ရင်…ချရေးလိုက်ဗျ….
သားဦး၊မြေးဦး says: ကဗျာများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ရေးနေလို့ဆရာထက်အတွက်ကဗျာ ရေးပေးစေလိုပါတယ်
maung khinmin says: ကျုပ်အဲလိုတော့…တမင်ရည်ရွယ်ပြီး…မရေးတတ်သေးပါဘူးဗျာ…
marblecommet says: အနုပညာ ကိစ္စမှာ ကာရန်တွေ
အခုအချိန်ထိ မြန်မာ ကဗျာကောင်းတွေ
အထူးသဖြင့် မခင်စောမူတို့ ၊ အချုပ်တန်း ဆရာဖေတို့ ၊ သီလ၀ံသတို့…
နောက်ဆုံး ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ဗေဒါလမ်းတို့ပေါ့….
Comments By Postစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - ဆူး - ko pauk mandalayဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - kyeemite - padonmarမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - Nyo Win - kyeemiteသစ်ပင်တစ်ပင်၏ကျဆုံးခန်း...Kathit Tree.. - ဆူး - kyeemiteစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - Foreign Resident - Foreign Residentမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အလင်း ဆက် - လုံမလေးမွန်မွန်လုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - ဆူး - kaiလူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၆) - လုံမလေးမွန်မွန် - မဟာရာဇာ အံစာတုံးစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - Foreign Resident - Foreign Residentသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - naywoon niကောင်းတာလည်း ရှိတယ်။ .......ဆိုးတာလည်းရှိတယ်။ - padonmar - ခင်ခရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ ပြည်မြန်မာ - padonmar - kaiဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - kai - ဦးဦးပါလေရာခရီးသည်လေးသို့ - nway kyu - marblecommet“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - uncle gyi - padonmarစည်တော်ကြီး - ko pauk mandalay - ဦးဦးပါလေရာပုညကြိယာဆယ်ပါး - kyaw hteik - padonmarနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - uncle gyi - BMTM Mdy``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - padonmar - BMTM Mdyအဟံ ပထမံ - Ko chogyi - padonmarဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - padonmar - မဟာရာဇာ အံစာတုံး၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - TNAEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62187 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59481 Kyats )MaMa (58061 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...